:: My Little World ::: June 2013
[Game] My Own Kingdom (epic)
Yes, it is time to build up my own kingdoms within the game ;)
အသိတစ်ယောက် ဆော့တာတွေ့ ပြီး ဒီဂိမ်းကို ဆော့ဖြစ်တယ်။ ဒီဂိမ်းကို လူတိုင်းတော့ ကြိုက်မယ် မထင်ဘူး။ မကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက်တော့ အတော် ပျင်းဖို့ ကောင်းမယ် ထင်တယ်။ EPIC ကာတွန်းကြိုက်တဲ့ သူတွေတော့ သဘော ကျလောက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကာတွန်းကြည့်ပြီး ကြိုက်လို့ဒီဂိမ်းကို တွေ့ တွေ့ ခြင်း ဒေါင်းလုတ်လုပ် စမ်းကြည့်ဖြစ်ခဲ့တာ။
ခုလက်ရှိ ကိုယ့် စိတ်အခြေအနေနဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်လို့ဆက် ဆော့ဖြစ်နေတယ်။ ခေါင်းရှုပ်လို့ဘာမှ မစဉ်းစား ချင်ဘူး။ ဒီဂိမ်းကလည်း ဘာဆို ဘာမှ စဉ်းစားနေစရာ မလိုဘူး။ ဂိမ်းထဲက Task တွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု လိုက်လုပ်သွားရုံတယ်။ ပုံတွေကြည့်ရတာ ကာတွန်းထဲကလိုပဲ လှတယ်။ စိမ်းစိမ်းစိုစို ရှိတယ်။ ဆော့နေတာ ၂ ရက် ရှိပြီ။ လယ်ဗယ် ၁၄ ရောက်ပြီ။
ကာတွန်းထဲမှာ Grub & Mub ကို သဘောအကျဆုံးပဲ။ ကောင်မလေး က Talking snails ဆိုပြီးပြောတဲ့အချိန်မှာ Mub ပြန်ပြောတဲ့အခန်းကို သဘောကျတယ်။
Mub: What's going on, baby girl?
Mary Katherine: Talking snails.
Mub: Actually, he'sasnail. I'masluuuug. No shell over here, baby. It just slows me down.
The official game inspired by the 3D animated action-adventure movie (EPIC).
GooglePlay for Android
iTunes Store for iPhone and iPad
Posted by Nay Nay Naing at 6/25/2013 02:21:00 PM0comments
Haze In Singapore Hits New High - "hazardous"
အလုပ်ကအပြန် ၈ နာရီကျော်က PSI 190 ရှိရာကနေ ည ၉ နာရီမှာ PSI 290၊ အခု ည ၁၁ နာရီမှာ PSI 321 ရောက်သွားပြီ။
အခန်းထဲမှာ တံခါးတွေ ပြူတင်းပေါက်တွေ အလုံပိတ် အဲယာကွန်းဖွင့်ထားလို့ ရလို ခံသာသေးပေမယ့် အဲယားကွန်း မရှိတဲ့ အိမ်တွေ၊ အခန်းတွေမှာ ဘယ်လိုနေကြမလဲ မသိဘူး။ ခုနက မီဖိုချောင်ထဲ ခဏသွားတာ လည်ချောင်းတွေ ချက်ချင်းယားတတ်လာပြီ မရပ်မနား ချောင်းဆက်တိုက်ဆိုးတာနဲ့ချက်ချင်း အမြန် အခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာရတယ်။ ရင်ကြပ်အခံ နည်းနည်းရှိတော့ မီးခိုးနံ့ရတာနဲ့ချောင်းဆိုးတော့တာပါပဲ။
ဒီမနက် အလုပ်သွားချိန်တုန်းက အဲ့လောက် မဟုတ်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် နေ့ လည်စာ စားချိန်လောက်ကတည်းက PSI 170 လောက် ရောက်နေပြီ။ ဒီရက်တွေမှာ နေ့လည့်အပြင်မထွက်ရအောင် ထမင်းဘူးယူသွားတော့ အဲ့ဒီ ပူတယ်၊ နေရ အတော်ခက်နေပြီ ဆိုတာကို သူများအပြောနဲ့ ပဲ သိလိုက်တာ။
အလုပ်မှာ တနေကုန် အဲယာကွန်းတွေနဲ့ မို့မသိသာဘူး။ ဒီညနေ အလုပ်အပြန် ကားဂိတ်မှာ ၁၅ မိနစ်လောက် ကားစောင့်လိုက်ရတော့မှ အတော် အီစိမ့်သွားတယ်။ ကိုယ်တိုင်ခံစားရမှ အရမ်းဆိုးပါလား သိတော့တယ်။ မီးခိုးတွေတင်မကဘူး ပူကလည်း အရမ်းပူတယ်။ ဆိုးတယ်။ မီးဖိုဘေးက နေရသလို ပူစပ်ပူလောင်ကြီနဲ့ပူတာ။ ဒါတောင် အဲဒီအချိန်က 190 ပဲရှိသေးတယ်။ ခုလို ၃၀၀ ကျော် ဆို ဘယ်လို ပိုဆိုးမယ်။
ခု ဒီတိုင်း ထိုင်နေရင်းတောင် လည်ချောင်းတွေယားလာတယ်။ အိပ်မှ ဖြစ်မယ်။ အခြေအနေ ဒီထက်ပို ဆိုးမလာပါစေနဲ့ လို့ ပဲ ဆုတောင်းရတော့မှာပါပဲ။
ဒီညနေ အပြင်သွားစရာရှိတာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အကူအညီပေးလို့သွားဖို့ မလိုပဲ အိမ်တန်းပြန်လာလို့ ရသွားတယ်။ သူသာ မကူညီရင် မလွယ်ဘူး။ ရာသီဥတု အခြေအနေက ဆိုးရတဲ့အထဲ ညနေအလုပ်ပြန်ချိန်မှာ ရထား MRT (NEL) ခရမ်းရောင်လိုင်းကပျက်တော့ လူတွေအကုန် လမ်းပေါ်ရောက်ပြီး ကားလမ်းတွေ တော်တော် ပိတ်သွားတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒီလို မီးခိုး အခြေအနေနဲ့အပြင်မှာ ၃-၄ နာရီနေလိုက်ရမယ်ဆို အတော်ခံလိုက်ရမှာ။ သူငယ်ချင်းကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါကြောင်း. SINGAPORE'S air is now "hazardous" as the Pollutant Standards Index soared to 321 at 10pm, the worst reading in its history.
Air becomes "hazardous" when the index passes 300. The previous worst reading was 226, in 1997. (StraitsTimes)
Posted by Nay Nay Naing at 6/19/2013 11:23:00 PM0comments
My Lunch Box - 18 June 2013
နေ့ လည်အပြင်မထွက်ချင်လို့ဒီနေ့ထမင်းဘူးထည့်လာတယ်။ ငါးမုတ်ကြော်တယ်။ ကြက်ဥကို ကြက်သွန် နဲ့ချယ်ရီ ခရမ်းချဉ်သီးလေးတွေနဲ့ ရောမွှေကြော်ပြီး ချခါနီးတော့ ငရုတ်သီးစိမ်းညှပ်ထည့်လိုက်တယ်။ ထမင်းကို ငါးကြော်ဆီဆမ်းလာတယ်။ ၇း၅၀ အိပ်ရာထ အားလုံးချက်ပြုတ်ပြီး ရေမိုးချိုးလို့အိမ်က ထွက်တဲ့အချိန် ၈း၃၀။
Posted by Nay Nay Naing at 6/18/2013 12:02:00 PM 1 comments
Posted by Nay Nay Naing at 6/10/2013 01:34:00 PM 1 comments